केपी ओलीको सचिवालयमा हेरफेर, कसलाई के जिम्मेवारी ?
ARCHIVE, POLITICS » केपी ओलीको सचिवालयमा हेरफेर, कसलाई के जिम्मेवारी ?
काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा हेरफेर भएको छ ।
प्रमुख स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी राजेश बज्राचार्यलाई दिइएको छ । काठमाण्डु कीर्तिपुरका बज्राचार्य एक दशकअघि देखि ओलीको स्वकीय सचिवको रुपमा कार्यरत छन् ।
अनिश दाहाललाई संसदीय फाँट र विकास निर्माणका काम हेर्ने गरी स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । अनेरास्ववियुको राजनीतिसँगै नेकपा एमाले झापा–काठमाण्डु सम्पर्क मञ्चको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका दाहाल विगत एक वर्षदेखि ओलीको सचिवालयमै रहेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय गर्न चेतन अधिकारीलाई प्रेस संयोजकको जिम्मेवारी दिएका छन् । डेढ दशकदेखि मूलधारको पत्रकारिता गर्दै आएका अधिकारी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा वरिष्ठ सञ्चार विज्ञ (प्रेस संयोजक) का रुपमा कार्यरत थिए । - काठमाडौँ टुडे